Antokon-dRavalomanana Marc : Nisintaka tsikelikely ireo mpanao politika matanjaka -
AccueilRaharaham-pirenenaAntokon-dRavalomanana Marc : Nisintaka tsikelikely ireo mpanao politika matanjaka
Tsy miara-dia amin-dRavalomanana intsony ny Mfm tarihin’i Manandafy Rakotonirina. Tia tena loatra Ravalomanana, hoy izy, ka tsy mahalala afa-tsy ny tombontsoany. Nanao fanakianana mavaivay an-dRavalomanana izy tamin’iny fihetsiketsehana nataon’ny filoha teo aloha teny Analakely iny.
Mpanao politika matanjaka teo akaikin-dRavalomanana Marc foana anefa i Manandafy Rakotonirina ary nitolona ho azy tamin’ny famerenana azy eto an-tanindrazana. Banga tanteraka mihitsy ity antoko Tim ity, nilaozan’itony mpanao politika andrarezina itony. Tsy vitan’ny hoe banga fa tena mihen-danja tanteraka, ka ny fakana fahefana eny an-dalambe sisa heveriny fa mety hamerina azy eo amin’ny fahefana.
Fa mpanao politika matanjaka nisintaka an-dRavalomanana Marc ihany koa Botozaza Pierrot. Nanangana ny antokony manokana izy, izay antsoina hoe Zami na Zanaka Ambanivolo Mivoatra. Ny faran’ny herinandro teo, tany Toamasina , no nanambarany ny fitsanganan’ity antoko politika hoentiny ity. Tamin’izany no nanambarany fa tsy mpikambana ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara intsony ny tenany. “Efa tsy ilainy intsony aho matoa tsy nantsoiny tamin’ny fananganana ny birao nasionaly natsangany teny Tanjombato ”, hoy izy. Miseho amin’ny endrika maro, hoy izy, ny fanavakavahana ao anatin’ity antoko ity. Nanomboka tamin’ny fanolorana kandidà ho filoham-pirenena tamin’ny 2013 izany ary mbola nitohy tamin’ny fanolorana kandidà ho senatera.
Mpanao politika isan’ny matanjaka tao anatin’ny Tim i Botozaza Pierrot. Ankoatra ny maha efa minisitra azy, dia nananan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fitokisana koa izy.
Ilay vehivavy mpitarika ny fikambanana hoe “Vot” na Vondron’olon-tsotra iny sisa no mijoro ho mpiara-dia amin-dry Marc Ravalomanana. Amin’ny maha vondron’olon-tsotra azy izay moa, dia tsy hita izay ambara satria sady tsy mpanao politika no tsy teknisianina antenaina hitondra hevi-baovao hanohanany ny antoko tohanany izy.
Mitady anarana hetsika entina hikitihana ny vahoaka hanakorontana hatrany ireo solombavambahoaka, ka any andrasan’ izy ireo dia ny ho sakanan’ny mpitandro ny filaminana sy hisian’ ny korontana ary fandrobana ny fananan’ny Malagasy izay mba mitady. ...Tohiny